Sweety Home | Modern furniture made in Myanmar
Sweety Home held the amazing social and events with special promotions.
" Nationwide Promotion 2017 "
အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ ဆွိတီးဟုမ်းရဲ့ " Nationwide Promotion 2017 " ပြန်လာပါပြီ ခင်ဗျာ...။
မင်္ဂလာဆောင်မယ့် ကိုကို မမ တွေ အိမ်သစ်တက်မယ့်သူတွေ ပရိဘောဂအသစ် ဖြည့်တင်းမယ့် သူတွေအတွက် အထူးအခွင့်အရေးအနေနဲ့ ဆွိတီးဟုမ်းရဲ့ စပရင်မွေ့ရာ၊ ပရိဘောဂ၊ မင်္ဂလာခန်းဝင်အမျိုးမျိုးနဲ့ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းမျိုးစုံတို့ကို 7% မှ 20% အထိ ဈေးလျော့ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင် ငွေကျပ် သိန်းနှစ်ရာကျော်တန်ဖိုးရှိ “ခုခြစ် ခုပေါက် ခဲခြစ် ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်” လဲ ပါသေးတယ်ဗျို့ ….
ရန်ကုန် မန္တလေးမြို့ ရှိ ဆွိတီးဟုမ်းအရောင်းပြခန်းများနှင့် အမြို့ မြို့ အနယ်နယ်ရှိ ဆွိတီးဟုမ်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်တွေ မှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီး ကံစမ်းမဲ ကာလကတော့ အောက်တိုဘာလ (၁)ရက်နေ့ မှ (၃၁)ရက်နေ့ အထိပဲမို့ အခုပဲ အပြေးလေး ဝယ်ထားမှဖြစ်မယ်ဗျို့
1st OCT,2017 &horbar; 31TH OCT, 2017
Sweety Home(YGN) 95-1-547122, 551591. Hot Line: 09-977919111
Sweety Home(MDY) Ph : 02 - 283598,09 91029985. Hot Line : 09 977919888
" ချစ်စရာ ခရစ်စမတ်အိမ်လေးနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး လက်ဆောင်များရယူကြရအောင် "
ကဲ…. ပျော်ရွှင်စရာ “ခရစ်စမတ်” ကာလနှင့် “နှစ်သစ်ကူး” အချိန်လေးရောက်ရှိလို့လာပါပြီ!အားလုံးပဲ “Merry X’mas & Happy New Year” ပါလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်…. ဆွိတီးဟုမ်းမိသားစုမှ မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်များအတွက် ရင်ခုန်ပျော်ရွှင်စရာ ကျပ်တစ်သိန်းဖိုးဈေးဝယ်ခွင့်လက်မှတ်များ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်နှင့်အတူ ကြွေပန်းကန်/ ခွက်လှလှလေးများကို 50% အထိ အထူးဈေးနှုန်းများဖြင့်ရောင်းချပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်! ဒီပျော်ရွှင်စရာ အစီအစဉ်လေးမှာ ပါဝင်ဖို့အတွက် အောက်ပါအချက်လေးတွေ လုပ်ဆောင်ရုံပါပဲ…
(၁) ဆွိတီးဟုမ်း Liivng Mall(Hlaing) ရွာမကျောင်းလမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်(ဆင်ရေတွင်း မှတ်တိုင်အနီး)ကို လာရောက်ပြီးခရစ်စမတ် အိမ်လေး နှင့် အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်ပါ။
(၂) ယခု တင်ထားသော Post ကို Like & Share ပြုလုပ်ပါ။
(၃) ခရစ်စမတ်အိမ်လေးနှင့် တွဲရိုက်ထားသော ပုံကို ၎င်း Post ၏ Comment မှပေးပို့ပါ။
အဲဒါဆိုရင်တော့ ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ပေး ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်လေးပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ! နောက်ပြီး ခေတ်မှီလှပစွာ ခင်းကျင်းပြသထားသော စပရင်မွေ့ရာများ၊ ပရိဘောဂများ၊ မင်္ဂလာခန်းဝင်ပစ္စည်းများ နှင့် ရုံးသုံး/ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီး အရည်အသွေးမြင့် ကြွေပန်းကန်/ ခွက်လှလှ လေးများကို (50%) အထူးလျှော့ဈေး များဖြင့် ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်! ရင်ခုန်ပျော်ရွှင်စရာ ခရစ်စမတ်နှင့် နှစ်သစ်ကူးအစီအစဉ်လေးကို5Jan 2017 အထိ ကျင်းပပေးသွားမှာ ဖြစ်ပြီး7Jan 2017 နေ့တွင် ကျပ်တစ်သိန်းတန် ဈေးဝယ်ခွင့်ရရှိသူကံထူးရှင် (၃)ဦးအား မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပြီး ကြေငြာပေး သွားမှာမို့ ပါဝင်ကံစမ်းကြပါစို့!
23TH DEC,2016 &horbar; 5TH JAN, 2017
Sweety Home(YGN) 01-521255, 551591, 8550358, 9669544,205224
Sweety Home(MDY) 02-2835938, 60810, 09-9779 19888
Copyright Sweety Home Industy Co,.Ltd. All Right Reserved.